Marriott Resorts muMexico inozivisa Nyowani Director weKutengesa uye Kushambadzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mexico Kuputsa Nhau » Marriott Resorts muMexico inozivisa Nyowani Director weKutengesa uye Kushambadzira
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Akasiyana Nhau
Marriott Cancun Collection, iyo inosanganisira JW Marriott Cancun Resort & Spa uye Marriott Cancun Resort, yakazivisa kugadzwa kweGlaucia Canil kuti ishande seMutungamiriri weZvekutengesa neKushambadzira.
Mune rake basa nyowani, Canil achave nebasa rekutungamira nzvimbo dzekushambadzira 'nekutengesa kushambadzira.
Iye zvakare achagadzira marongero ekuwedzera kwemari uye anoshanda nekutengesa uye nehukama neruzhinji.
Icho chinangwa chichava chekusimbisa inoenderana midhiya mameseji uye yekutaurirana nzira.
Nhengo yenguva refu yemhuri yeMarriott yemhando, kusarudzwa kwaCanil kunounza basa rake rakazara denderedzwa, atanga semubati wechuru paJW Marriott Cancun Resort & Spa's lounge, Club 91.
Mushure memakore matatu, akatora mutsa wake uye bhizinesi-kumberi nzira kumba kwake nyika yeBrazil, kwaakagadzwa Sales Executive paRenaissance Sao Paulo. Mumakore ake ese aripo, Canil akabata nzvimbo dzakasiyana siyana dzekutengesa achiwana mibairo inoratidzirwa nemazita anokosha kusanganisira President's Circle uye Chairman's Circle mibairo.
Yakanga isiri nguva refu zvisati zvaitika Cancun anonzi Canil back, paakange agamuchira chinzvimbo cheManeja weKutengesa neMarriott Cancun Ungano muna 2016. Kuzvipira kwake mukubudirira kwechikwata chake nenzvimbo dzekugara, kushinga kwake, pamwe nehunyanzvi hwake hwakasimba hwehutungamiriri, zvakamupa kukwidziridzwa munguva pfupi yapfuura kuna Director we Kutengesa uye Kushambadzira kwehanzvadzi nzvimbo dzekugara.
Paanenge asiri kushanda, Canil anogona kuwanikwa achirova pasi pezuva, achifarira mahombekombe eCancun nemurume wake nemwanasikana ane makore gumi nerimwe.